Diego Costa oo ugu dambeyn dib ugu soo laabtay London – Gool FM
Diego Costa oo ugu dambeyn dib ugu soo laabtay London
(London) 05 Sebt 2017. Muddo saddex bilood ku dhawaad uu ku sugnaa Brazil Diego Costa ayaa ugu dambeyn dib ugu soo laabtay magaalada London ee dalka Ingiriiska sida ay warineyso Marca.
Arrinkan ayaa bilow u noqon kara dib u heshiisiinta laacibka iyo kooxda Chelsea.
Sababta ugu wayneyd uu Costa u diidanaa inuu dib ugu soo laabto Chelsea ayaa waxay ahayd in Conte uu u sheegay inuu ka dhan yahay isla markaana uusan ku jirin qorshihiisa kal ciyaareedka cusub isla markaana uu macallinka reer Talyaani ku amray inuu tababarka la qaato kooxda labaad.
Yeelkeede, 28 jirka ayaa iminka u muuqda inuu aqbalay uu maqlay dalabka Blues ee ah inuu dib ugu soo laabto tababarka kooxda labaad isla markaana uu ka shaqeysiiyo taam ahaanshihiisa jir ahaaneed si suuqa loo dhigo.
Kooxda uu doonayo Costa ee Atletico Madrid ayaa la warinayaa inay ku boorisay laacibka inuu nabad la qaato kooxdiisa si ay ugu ogolaadaan inuu ku soo biiro bisha Janaayo marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Kooxda reer London ayaa dhaliyaheeda reer Spain ku qiimeysay adduun dhan 50 milyan oo bound.
GOOGOOSKA: Italy vs Israel 1-0 (Talyaaniga oo helay 3 dhibcood oo muhim ah)
Xiddigaha maaliyadahooda loogu iibsiga badan yahay 2017 oo la soo saaray